पार्टी-सरकार समन्वय मिलाउँदै नेकपा- समाचार - कान्तिपुर समाचार
आश्विन ६, २०७७ बबिता शर्मा
काठमाडौँ — नेकपाले लामो समयदेखिको पार्टी र सरकार समन्वयको विवाद यसपटक व्यवस्थापनको कोसिस गरेको छ । ७९ औं दिनमा सकिएको स्थायी कमिटी बैठकका निर्णय कार्यान्वयनको सिलसिलामा बसेको सचिवालय बैठकमार्फत नेकपाले पार्टी र सरकारबीच समन्वयको कोसिस गरेको हो । यद्यपि निर्णय व्यवहारमै कार्यान्वयनको पाटो भने टुंगिन बाँकी छ ।
आइतबार र मंगलबार बसेको सचिवालय बैठकले लिएका निर्णयले पार्टी र सरकारबीचको समन्वयलाई जोड दिएको पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए । ‘पार्टी भित्रको एकता, समझदारी र विश्वासलाई सुदृढ गर्ने, पार्टी र सरकारको सम्बन्धलाई मजबुत बनाउने, सरकारको कामलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाई सरकारको विश्वसनियता अझ बढी बनाउने र सरकारलाई अझ सफल बनाउने दिशातिर अगाडि बढ्ने विश्वास र अपेक्षासहित बैठक समापन भयो,’ बैठकलगत्तै प्रवक्ता श्रेष्ठले भने ।
सचिवालय बैठकका चारमध्ये मुख्य दुई एजेन्डा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्तिका विषय जोडिएका थिए । यी दुवै एजेन्डामा पार्टीले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । यसका आधारमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्तिमा काम गर्नेछन् । आइतबारको बैठक पेरिसडाँडास्थित कार्यालय र मंगलबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको थियो । दुवै बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पूरै समय बसेका थिए ।
विभिन्न विकल्पमा छलफल भए पनि सचिवालय बैठकले कार्यसम्पादनका आधारमा वहालवाला मन्त्री हटाएर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको जिम्मा प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएको छ । त्यसअघि प्रधानमन्त्रीले पार्टीका अन्य नेताहरुसँग आवश्यकताअनुसार परामर्श गर्ने सचिवालयको निर्णय छ । यस विषयमा समेत ओली र दाहालबीच छलफल सुरु भएको छ । सरकारको काम प्रभावकारी बनाउन मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने नेकपा स्थायी कमिटीको निर्णय छ ।
यसबाहेक सचिवालय बैठकले विभिन्न संवैधानिक निकायको पदपूर्तिको बारेमा संवैधानिक परिषद्को बैठक छिटो बसेर आवश्यक निर्णय प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुझाव दिएको छ । साथै परिषद्को बैठकलाई सुचारु गर्न वा पुदपूर्तिसम्बन्धी निर्णय लिने प्रक्रियामा अगाडि बढ्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई पनि अनुरोध गरेको छ ।
संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ । विपक्षी दलका नेतासमेत परिषद्‌‌मा सदस्य रहने भएकाले प्रधामन्त्री ओलीले यसअघि पटक–पटक विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरेका थिए । १३ संवैधानिक निकायमा करिब ४० पद लामो समयदेखि रिक्त छन्, जसले ती संस्थाको कार्यसम्पादन प्रभावित हुँदै आएको छ ।
२६ भदौमा सकिएको स्थायी कमिटीको निर्णयमा सरकार र पार्टीबीच समन्वयमा जोड दिइएको थियो । बैठकपछि अध्यक्षद्वयले जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशन–५ मा ‘सरकार पार्टीको नीतिगत मार्गदर्शनमा सञ्चालन हुने स्थापित मान्यतालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने’ भनिएको छ ।
यसबाहेक निर्देशनमा छ, ‘सचिवालयमा गरिने छलफल, अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्श र सहमति तथा संवैधानिक व्यवस्था र कानुनी प्रबन्धका आधारमा संघीय मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन तथा राजनीतिक नियुक्ति सम्बन्धी निर्णय गर्ने ।’
स्थायी कमिटीको यसै निर्णयका आधारमा सचिवालयले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्तिबारे छलफल गर्दै सरकारसँग समन्वयको ढोका खोलेको हो । स्थायी कमिटीका निर्णय कार्यान्वयनका लागि सचिवालयमा भएको छलफल सकारात्मक भएको नेताहरुको टिप्पणी छ । यद्यपि निर्णय कार्यान्वयन कसरी हुन्छन् भन्ने टुंगिन बाँकी रहेकाले केही समय हेर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल भन्छन्, ‘पार्टीका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सकारात्मक छलफल भएको छ । अब पूर्ण कार्यान्वयनमा गएपछि समन्वयको सन्देश जान्छ ।’ स्थायी कमिटी बैठकले गरेको अध्यक्षद्वयको कार्यविभाजनमा पनि सरकार र पार्टी समन्वयलाई जोड दिइएको छ । कार्यविभाजनमा भनिएको छ, ‘अध्यक्षद्वयले पार्टी र सरकारबीचको आपसी सम्बन्धलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउन समन्वय गर्ने । सामूहिक नेतृतव तथा व्यक्तिगत जिम्मेवारीको संस्थागत प्रणाली अवलम्बन गर्ने र सबल तुल्याउने ।’
तर, सरकार गठनको अढाई वर्षमा नेकपा र सरकारबीच समन्वय अभावलाई लिएर विवादसमेत हुँदै आएको थियो । यतिसम्म कि पार्टीका माथिल्ला तहका कमिटी बैठकमा ‘पार्टी–सरकार समन्वय’ छलफलको विषय धेरै पटक बनेका थिए । र, सरकार–पार्टी समन्वयको असर सरकारको काममा समेत देखियो । सरकारका कयौं निर्णयको पार्टीभित्रबाट विरोध भए ।
यसअघि सरकारको काम पार्टीले स्वामित्व नलिएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले असन्तुष्टि पोख्दै आएका थिए । पार्टी नेताले भने सरकारले पार्टीसँग सल्लाह नगरी विवादित निर्णय गरेको गुनासो गर्दै आएका छन् ।
सरकारले महत्वपूर्ण निर्णय लिँदा पार्टीभित्र पर्याप्त छलफल नगरेको भनेर कार्यकारी अध्यक्ष दाहाल, वरिष्ठ नेताद्वय खनाल र माधवकुमार नेपाललगायतका नेताले पार्टी बैठकमा मात्रै होइन, सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।
१५ देखि १९ माघसम्म चलेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पेस भएको नेकपाको राजनीतिक प्रतिवेदनमा सरकार–पार्टी सम्बन्ध र असरबारे उल्लेख थियो । ‘लामो समयसम्म पार्टी समितिहरूको अभावले गर्दा न सरकारले गरेका राम्रा कामहरूको व्यवस्थित रूपले जनतामा प्रचार हुन सक्यो न सरकारलाई कमीकमजोरीबाट बचाउन पार्टीले नेतृत्वदायी भूमिका नै खेल्न सक्यो,’ प्रतिवेदनमा थियो, ‘ढिलै भए पनि अब पार्टी एकता प्रक्रियाले पूर्णता पाएको छ । आउँदा दिनमा पार्टी र सरकारका कामहरूका बीचमा आपसी समन्वयमा सुधार भएर दुवैको प्रभावकारितामा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।’
बैठकमा सरकार र पार्टी समन्वयबारे मुद्दा उठेपछि बैठक समापनमा प्रधानमन्त्री ओलीले तीनवटै तहको सरकार पार्टी निर्णयका आधारमा सञ्चालन हुने बताएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘म तपाईंहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु, तपाईंहरू स्पष्ट भए हुन्छ, पार्टीले नै सरकार चलाउने हो, सरकारले पार्टी चलाउने हुँदै होइन । तीनवटै तहको सरकार पार्टीबाटै निर्देशित हुन्छ । तर, सरकारले गरेका राम्रा काम जनताबीच लैजानुपर्ने हुन्छ । यसमा सरकारलाई पार्टीको साथ सहयोग चाहिन्छ । राम्रा, जनमुखी र राष्ट्रिय हितका पक्षमा भएका कामको खुलेर प्रचार गरौँ ।’
पार्टी–सरकार विवादका घटना
सरकारका विभिन्न निर्णयलाई लिएर विगतमा नेकपाभित्र विरोध भएका छन् । गुठी विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक, नागरिकता विधेयक पार्टीमा समन्वय नगरी संसद् पुगेको भन्दै सचिवालयमा रहेकै नेताहरूले सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए । सडकमा भइरहेको विरोधमा पार्टीभित्रको स्वर मिसिएपछि सरकारले आफ्ना केही निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था आएको थियो । यस्तै राजनीतिक नियुक्ति, बिमस्टेक मुलुकहरूको सैन्य तालिम, राजदूत सिफारिस, युनिभर्सल पिस फाउन्डेशनको सम्मेलन, यति समूहसँगको सम्बन्ध र नेपाल ट्रस्टको जग्गा यति समूहलाई लिजमा दिने लगायतका विषयमा पार्टीभित्रबाट सरकारको आलोचना भएको थियो ।
प्रकाशित : आश्विन ६, २०७७ १९:२३
यथास्थितिको पृष्ठपोषण कविवर माधवप्रसाद घिमिरेका रचनाहरूको मूल उद्देश्य नभएर उपोत्पाद पनि हुन सक्छ भन्ने शंकाको लाभसमेत दिन हच्किने आलोचकहरू के बिर्सिदिन्छन् भने, ‘राष्ट्रकवि’ उपाधिभन्दा नेपाली साहित्यमा उनको योगदान सायद केही न केही बढी नै छ, कम त कदापि होइन ।
आश्विन ६, २०७७ सीके लाल
काठमाडौँ — आजभोलि कालकटनी आफैंमा एउटा चुनौती बन्न पुगेको छ । महाव्याधिको विस्तार मापन गर्ने भौतिक जाँच घट्दो छ । रोगले समाएका व्यक्तिहरूको संख्या बढ्दो छ । मृतकको गणनांक ऊर्ध्वमुखी छ । सरकारी तयारी घट्ने क्रममै नरहे पनि यथावत् छ ।
दक्षिण एसियाको सबभन्दा लामो बन्दाबन्दी नेपालमा लगाइएको थियो । छिमेकी देशहरूका तुलनामा सामान्यजनले सरकारी निषेधाज्ञाको सबभन्दा निष्ठावान् पालना पनि नेपालमै गरेका रहेछन् । तर, झन्डै छ महिनापछि अब आएर सरकारले महाव्याधिका अगाडि दुवै हात उठाएर आत्मसमर्पण गरेजस्तो छ । आफ्नो हित सोचेर आफ्नो सुरक्षाका उपायहरू आफैं अवलम्बन गर्नु एवं ईश्वरीय चमत्कारमा विश्वास गर्नुको विकल्प छैन ।
बिहान–बेलुकाको छाक टार्ने चिन्ता छैन भने निदाउन असहज भए पनि रात बिताउन उति साह्रो कठिन हुँदैन । सामान्य मध्यमवर्गीय परिवारका सदस्यहरूमा बिहानको नित्यकर्मबाट सुरु हुने दिनचर्यामा विद्युतीय तथा अंकीय (डिजिटल) उपकरणहरूको भूमिका बढिरहेको छ । कम्प्युटर अब घरघरको कक्षाकोठा भएको छ । अन्य व्यक्तिसँगको सम्पर्क हातेफोनमा समेटिएको छ । घरबन्दीको सबभन्दा अप्ठेरो समय साँझपखको हो । सायद त्यसैले बेलुका ‘हावा खाने’ निहुँमा डुलुवाहरूले सडक ढाकेका हुन्छन् । कतिलाई त लाग्दो हो, चिउँडोमा मास्क एवं हातमा तरकारी किन्ने झोला देखेपछि कोभिडको विषाणु वरिपरि आउनै हच्किन्छ ! उपयुक्त किसिमको मास्कलाई नाक र मुख छोप्ने गरी लगाउनु रोकथामको प्रभावकारी उपाय हो भनिएको छ । काठमाडौंको कुनै पनि सडकपेटीमा दुई मिटरको भौतिक दूरी कायम राख्न सम्भव छैन । पसलहरूमा न्यूनतम कायिक अन्तर (फिजिकल डिस्टन्स) राखेर किनमेल गर्न झनै असजिलो छ । शारीरिक श्रमबेगर गुजारा गर्न नसक्नेका बाध्यता बुझ्न सकिन्छ । कारोबारका लागि प्रत्यक्ष उपस्थिति चाहिने पेसा एवं व्यवसाय सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी जोखिमपूर्ण भए पनि आवश्यक हुन गएको छ । तर, हावा खान निस्केकाहरूले टोलटोलमा गर्ने भीडभाडबाट बच्ने एउटा उपाय स्वेच्छापूर्वक घरबन्दीमा बस्नु हो ।
स्वैच्छिक घरबन्दीमा समय काट्ने काम भने अनिवार्य बन्दाबन्दीमा भन्दा पनि अप्ठेरो हुने रहेछ । शरद् ऋतुको आगमनले भने साँझपख आकाशको रङ परिवर्तन नियालेर बस्ने आकर्षणले गर्दा कालबेलालाई केही सह्य बनाइदिएको छ । कुनै स्पष्ट कारणबिना महसुस हुने अवसादपूर्ण उदासीको भावनाका लागि अंग्रेजी भाषामा ‘मेलन्कली’ भन्ने शब्द प्रयोग हुन्छ । मदमत्त राज्यसत्ता आफ्नै जनतासँग कतिसम्म क्रूर हुन सक्छ भन्ने शासकीय नृशंसताको उदाहरण ‘मधेसको ९/११’ परिघटना पनि हो । आजभोलि सूर्यास्त हुन लागेको आकाशमा मेघ र प्रकाशबीचको घामछायाको खेलमा अन्ततः अँध्यारोले जित्छ । बल्लतल्ल देखिएको चन्द्रमालाई पनि आवारा बादलले छोपेपछि अँध्यारो गहिरिन्छ । उदासी गहिरिन्छ, मेलन्कली बढ्छ । यस्तै एउटा विषादयुक्त साँझमा गीतकार सागरका शब्दहरूलाई अनुराग सैकियाले संगीतबद्ध गरेको एवं अनुभव सिन्हाले संयोजन गरेको ‘र्‍याप सङ’ मनोज वाजपेयीको स्वर एवं प्रस्तुतिमा अवलोकन गर्ने संयोग जुट्न पुगेको थियो । घरबार छोडेर रोजीरोटीका लागि मुम्बई महानगरमा संघर्षरत भोजपुरीभाषी प्रवासी मजदुरको जीवनमा महाव्याधिले थपेको संकटलाई ‘बम्बई में का बा, इहवाँ का बा...’ प्रस्तुतिले सुरुचिपूर्ण तवरले समेटेको छ । भाषा र परिवेश फरक भए पनि जमुनाहा एवं गौरीफन्टा नाका हुँदै संसारमै दोस्रो सबभन्दा धेरै महाव्याधिको प्रकोपबाट ग्रस्त देशतिर लाग्न लामबद्ध नेपालीहरूको कथा ‘बूढ पुरनिया माई बाबू, ताल तलइया छूट गईल / केकरा से देखवाई मनवा, भीतरे भीतर टूट गईल...’ भन्दा खासै फरक छैन ।
समग्र साहित्यबारे एउटा प्रख्यात उक्ति छ । अपरिचित व्यक्ति बस्तीमा आयो वा रैथाने कतै यात्रामा निस्क्यो भने कथ्य बन्छ । त्यस्तो व्यक्तिको दृश्यावली अवलोकनलाई निबन्धमा समेट्न सकिन्छ । अन्य पात्रसँग भएका आकस्मिक भेट एवं संवादलाई अनुभवको आलोकमा गहनता तथा विस्तार हेरी कथा वा उपन्यासमा वर्णन गर्ने गरिन्छ । तर, कुन त्यस्तो भाव छ जसलाई कविताबाहेक अर्को कुनै लेखन विधिले न्याय गर्न सक्दैन ? अंग्रेजी स्वच्छन्दतावादका कवि पीबी शेलीले गहिरो उदासीलाई मधुरतम गीतको स्रोत ठहर्‍याएका छन् । लगभग त्यस्तै राय हिन्दी भाषाका छायावादी कवि सुमित्रानन्दन पन्तको छ, ‘वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान / उमड कर आँखों से चुपचाप, बही होगी कविता अनजान !’ झन्डै चार दशकअगाडि कविवर माधवप्रसाद घिमिरेले एउटा अन्तरंग कुराकानीमा त्यस्तै भाव व्यक्त गरेका थिए, ‘पीडालाई व्यक्त गर्न पद्यजत्तिको सशक्त माध्यम अर्को हुन सक्दैन ।’
कुरा सन् १९८३–८४ तिरको हुनुपर्छ, त्यसैले अनुस्मरणका सबै विवरण प्रामाणिक होइनन् । भनाइ नै छ, उमेरसँगसँगै व्यक्तिको संस्मरणमा अतिशयोक्तिको प्रयोग एवं बढाइचढाइ कुरा लम्ब्याउने प्रवृत्ति बढ्दै जान्छ । वार्तालापको सत्यापनका लागि दिवंगत स्रष्टाको कुनै कृतिलाई उद्धृत गर्न सकियो भने बेग्लै कुरा, नभए जुनसुकै व्यक्तिगत स्मरणलाई लेखक वा वाचकको निजी बयान मात्र ठहर्‍याउनु युक्तिसंगत हुन्छ । कविवर घिमिरे आफ्नो अभिभावकीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने सिलसिलामा अलिगढ मुस्लिम युनिभर्सिटी आइपुगेका थिए । अग्रज नेपाली विद्यार्थी भएका नाताले उनलाई आतिथ्य प्रदान गर्ने सौभाग्य पंक्तिकारलाई प्राप्त भएको थियो । हप्तादिनजति सँगै खाने र एउटै कोठामा सुत्ने संसर्गमा नानाभाँतिका कुरा हुन्छन् । त्यस बेलासम्म पंक्तिकारको नेपाली अध्ययन सीमित थियो । तर, कविवरको नाउँ भने अपरिचित थिएन । राजाको प्रशस्तिलाई अनिवार्य राष्ट्रगान तुल्याउनुभन्दा पहिले सन् १९६० को दशकमा समेत नेपालीय मिथिलाका केही विद्यालयमा पुलकित लालदास रचित सरस्वती वन्दना ‘वीणा–पुस्तक–धारिणी भगवती, ब्राह्मी जगद्व्यापिनी / विद्या–बुद्धि–प्रदायिनी, शुभमयी, हो अज्ञता–नाशिनी...’ पछि कविवरको ‘गाउँछ गीत नेपाली ज्योतिको पंख उचाली’ रचनालाई राष्ट्रिय गीतका रूपमा गाउन लगाइन्थ्यो । ‘अर्थ नबुझे पनि हामी खुसीसाथ गाउँथ्यौं’ भन्ने स्वीकारोक्तिमा कविवरको टिप्पणीले पद्यको शक्तिलाई सरल शब्दमा व्याख्या गर्छ, ‘गाउनलाई अर्थ बुझ्न जरुरी छैन, शब्दको अन्तर्निहित संगीत ठम्याउन सके पुग्छ’ ।
प्रत्येक शब्दले सन्दर्भअनुसार अर्थ्याउन सकिने एक वा सोभन्दा बढी प्रयोजन बोकेका हुन्छन् । भाषाशास्त्रीहरूले त्यसलाई शब्दकोशमा समेट्छन् । शब्दहरूको संयोजनले दिने अभिव्यक्तिको मानकीकरण वैयाकरणहरूले तय गर्छन् । अध्ययन, अवलोकन, अनुभव एवं अनुभूतिको आलोकमा गद्यकारले पठनीय रचना सृजना गर्न सक्छ । पद्यकार हुन सायद त्यतिले पुग्दैन । शब्दले बोक्ने चित्र, स्वर एवं भावसँगसँगै त्यसको अन्तर्निहित संगीतलाई ‘सुन्ने’ क्षमता भएन भने कविता प्रस्फुटित हुँदैन । पंक्तिहरू कविका हातबाट कोरिए पनि कविताको स्रोत संवेग हुन्छ । सिद्धहस्त कविसँग कविताको परिभाषा सोध्ने धृष्टता इन्जिनियरिङको एउटा विद्यार्थीले मात्र गर्न सक्थ्यो । कविवरले भने, कुनै बेला शिक्षक पनि रहिसकेकाले, झर्को नमानी लामो प्रवचन दिएका थिए । दैनन्दिन उपयोगिता बाहिरका सम्झनाहरू धमिला हुँदै जाने रहेछन् । स्मृतिको पुनर्रचना गर्ने हो भने सायद उनले विषाद, आकुलता, आवेग, निराशा, पीडा, अतृप्ति एवं आशाजस्ता संवेदनाहरूको सम्मिलित मनोदशालाई श्रेष्ठ कविताको उत्प्रेरक ठहर्‍याएका थिए । त्यस्तो जटिल मनोभावलाई शाब्दिक अर्थले मात्र अभिव्यक्त गर्न सकिँदैन । कुशल शब्दशिल्पीले पठनीय वा गेय प्रकृतिको गद्य र पद्य दुवै विधामा उत्कृष्ट रचना सृजना गर्न सक्छ । तर, त्यत्तिकैमा कविता भने बन्दैन । त्यही कुरा कवि मित्र विप्लव प्रतीकले पंक्तिकारलाई सन् १९९० को दशकमा बडो छोटो वाक्यमा सम्झाएका थिए, ‘कविता सुन्दा उम्दा लाग्नुपर्दछ !’
अभिभावकीय जिम्मेवारी पूरा भएपछि कविवरलाई शिष्टाचार भेटका लागि लगिएका व्यक्तिहरूको सूचीमा वरिष्ठ प्राध्यापकहरूका साथै विश्वविद्यालयका तत्कालीन उपकुलपति सैयद हामिद पनि थिए । वार्तालापको भाषा स्वभावतः हिन्दी थियो । कविवरको लवज ठम्याउँदै सैयद साहबले त्यो भोजपुरीको नजिक रहेको टिप्पणी गरे । उनले त्यो कुरा स्वीकार गर्दै भने, बनारसमा बसेको छात्रको हिन्दीमा भोजपुरी एवं अवधी भाषाको बराबर प्रभाव हुन्छ । फर्किने बेलामा पंक्तिकारलाई भनियो, ‘तपाईंको लवजको स्थानिकता ठम्याउन गाह्रो भयो । आम तराईवासीभन्दा फरक छ ।’ पंक्तिकारले भाषा गोरखापत्र एवं उच्चारण रेडियो नेपालबाट सिकेको हो भन्ने स्वीकारोक्तिमा उनको टिप्पणी थियो, ‘त्यही भएर तपाईंको भाषामा गणितको अंकवाचन गरेको जस्तो निश्चयात्मकता छ ।’
उमेरसँगै पछुतोहरूको सूची पनि लम्बिँदै जाने रहेछ । अहिले भएको भए त्यस टिप्पणीको व्याख्या सोधिन्थ्यो होला । औपचारिक भाषामा निश्चयात्मकता सायद स्वाभाविक हो । साहित्यमा भने वाक्य मात्र होइन, शब्दसमेतलाई एकभन्दा बढी अर्थको भारी बोक्नुपर्ने हुन्छ । सिद्धहस्त गद्यकार एवं नोबेल पुरस्कार विजेता भीएस नयपालले त्यही कुरा अझ कडासाथ भनेका छन् । उनको विचारमा एउटा वाक्यले एउटा मात्र अर्थ बोक्ने अनुच्छेद लेख्नु पाठकको समय एवं प्रकाशकको कागज र मसीको बरबादी हो । हुन पनि त्यस्ता एकलअर्थीय वाक्यहरूको सही ठाउँ प्रतिवेदन हो, साहित्य होइन ।
भेटघाटको कुनै कार्यक्रम नभएको एक दिन कविवरले कोठामा असरल्ल छरिएका पुस्तकहरूमध्ये हरिमोहन झा कृत मैथिली भाषाको कालजयी कृति ‘खट्टर कका’क तरंग’ भेट्टाएछन् । पढ्न गाह्रो भएको तर सुनाइए बुझ्न सकिने भाव व्यक्त गरेपछि त्यस संग्रहका केही रचना पाठ गरिएको थियो । हरेकपटक त्यो पुस्तक पल्टाउँदा त्यस बखत उनले गरेको टिप्पणीका नयाँनयाँ अर्थ खुल्छन् । शब्दहरू पंक्तिकारका हुन् । व्याख्या भने स्मरणमा आधारित छ । समयसापेक्ष रचना पठनीय हुन्छन् । अवसाद जगाउन सक्छन् । जुरुकजुरुक उचाल्न सक्छन् । कालनिरपेक्ष कृतिलाई रुचिकर बनाउनु कठिन काम हो ।
अधिकांश पाठक एवं श्रोता आफ्नो समयलाई नाघ्न (ट्रैन्सेन्ड) अनिच्छुक हुन्छन् । कालचेतना एवं कालातीत भावलाई एकसाथ समेट्न सकेको कृतिलाई मात्र कालजयी भन्न सकिन्छ । कविवरले उद्धरण गरेका संस्कृत श्लोकहरू सम्झिन सकिएन । सम्झेको के हो भने, कृतिमा प्रयोजन भएर पुग्दैन, कालजयी ठहरिन सौन्दर्य चाहिन्छ । सत्य र शिवको सुन्दरताको अन्तिम रूप नृत्य र संगीत हो । शब्दको अन्तर्निहित सुर नसमातीकन उत्कृष्ट रचना सम्भव छैन । र, वेदनाले निःशब्द भएका बेला शब्दको सुर सुनिन्छ । कविता असह्य पीडा वा अकल्पनीय उन्मादलाई सांस्कृतिक रूपमा उच्च वा सामाजिक रूपमा अधिक स्वीकार्य तवरले उदात्तीकरण (सब्लमेसन) गर्ने अभिव्यक्ति हो । त्यस्तो भावनात्मक संवेग अनुभूति नगरेको रचनाकारले कविता ‘लेख्न’ त सक्छ, कोर्न भने सक्दैन ।
प्रगतिशील शब्दकर्मीहरूमा सोद्देश्य साहित्यप्रतिको आसक्तिलाई ठम्याएर होला, मार्क्सवादी विचारका धारिला स्रष्टा बर्तोल्त ब्रेख्त विलौना गर्छन्, ‘कस्तो समय आएको हो / रूखहरूका बारेमा कुरा गर्नु अपराध हुन गएको छ / किनभने त्यस्तो कर्मले अन्य धेरै भयावह घटनाका बारेमा मौनतालाई जनाउँछ ।’ के अँध्यारो कालमा गीत गाइनेछन् भने आफ्नो प्रश्नको जवाफ पनि ब्रेख्त स्वयं दिन्छन्, ‘हो, गाइनेछन् अँध्याराका गीतहरू !’ अँध्याराका गीतहरूमा पनि प्रयोजनविहीन सौन्दर्य सम्भव छ । नव–प्रगतिवादीहरूको स्वभावजन्य निग्रह (रेजर्भेसन्स) बुझ्न सकिन्छ, तर जस्तोसुकै विभेदजन्य दमन एवं क्रूरताका बीच पनि प्रकृतिमा वीर तथा बीभत्सबाहेकका रसहरूको प्रवाह रोकिँदैन । सोद्देश्य साहित्य अतिरेक अभिव्यक्ति हो । कुनै पनि रचना यदि निरुद्देश्य छ भने त्यसलाई साहित्यिक कृति भन्न मिल्दैन । व्यक्तिवादमा ‘स्वान्त सुखाय’ पनि एउटा उद्देश्य नै हो । र, त्यस्तो कृत्यले अरू कसैको अहित नगरेसम्म कृतिको अन्तर्निहित सौन्दर्यलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहका भरमा बेवास्ता गर्नु उचित हुँदैन ।
कविवर आफ्नो कालखण्डका विलक्षण शब्दसाधक थिए भन्नमा कसैको दुईमत देखिँदैन । यथास्थितिको पृष्ठपोषण उनका रचनाहरूको मूल उद्देश्य नभएर उपोत्पाद (बाइप्रडक्ट) पनि हुन सक्छ भन्ने शंकाको लाभसमेत दिन हच्किने उनका आलोचकहरू के बिर्सिदिन्छन् भने, ‘राष्ट्रकवि’ उपाधि एवं प्रज्ञाप्रतिष्ठानको कुलपति पदभन्दा नेपाली साहित्यमा उनको योगदान सायद केही न केही बढी नै छ, कम त कदापि होइन । पिटर हैन्डलाई सर्बिया नरसंहारको क्षमायाचक ठान्नेहरू छन् । उनलाई सन् २०१९ मा साहित्यको नोबेल पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो । भीएस नयपाल इस्लामप्रतिको घृणा एवं हिन्दुत्व राजनीतिप्रतिको आसक्तिका लागि कुख्यात छन् । उनी पनि नोबेल पुरस्कार विजेता हुन् । वर्ग वा वर्णविरोधी क्रियाकलापमा प्रत्यक्ष सहभागिता देखिएकामा बाहेक कुनै पनि स्रष्टालाई राजनीतिक आस्थाका आधारमा मात्रै साहित्यिक रूपले निन्दा गर्नु अनुपयुक्त हुन्छ । बीपी कोइरालाका कथाहरूमा मधेसी पात्रहरू निरीह, दयनीय, आकर्षक तर अविकसित एवं अपरिष्कृत देखिन्छन् । त्यसले उनको रचनाको महत्त्वलाई घटाउँदैन । अलिगढपछि कविवरसँग छलफल गर्ने संयोग कहिल्यै जुरेन, तर उनका सम्झनाहरूसँग गरिने संवाद शब्दको अन्तर्निहित सुर समात्ने प्रयत्न जारी रहेसम्म कहिल्यै सकिनेछैन ।
प्रकाशित : आश्विन ६, २०७७ १९:२१